Sar 1.5 - Saturngod
Posted on Updated August 24, 2013 August 24, 2013 by saturngod
Sar ကို Dropbox feature ထည့်မယ်ဆိုပြီး ပြင်လိုက်တာ Dropbox feature ထည့်တဲ့ အဆင့်မရောက်သေးပဲ အခြား bugs တွေ UI တွေ အကုန်ပြန်ပြင်ပြီးတော့ 1.5 ထုတ်ထားပေးပါတယ်။
1.5 မှာ မြန်မာ keyboard rotating လုပ်တာကို improve လုပ်ထားပေးပါတယ်။ iPhone မှာဆိုရင်တော့ smooth ဖြစ်ပေမယ့် ipad verison မှာ rotate လုပ်ပြီးရင် english keyboard ခဏလေးပြောင်းသွားတဲ့ ပြဿနာရှိပါတယ်။ မြန်မာ keyboard ကို တန်းပြရင် ရပေမယ့် landscape ကနေ portrait ပြောင်းရင် keyboard က အလိုလို undock ဖြစ်သွားတယ်။ English keyboard ပြောင်း undock ပြန်လုပ်ရတဲ့ ပြဿနာရှိတယ်။ အဲဒါကြောင့် iPad version မှာ rotate လုပ်ရင် English keyboard ခဏပြပြီး မြန်မာ keyboard ပြန်ပြောင်းပေးတာ ပြင်ထားပါတယ်။ ပြင်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းရှာနေပါတယ်။ iPhone version လိုမျိုး iPad မှာ smooth ဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် Sar သုံးနေရင်း တစ်ခု သတိထားမိတာက Animation တွေက မလိုပဲ ရှုပ်နေတယ်။ Fullscreen mode ကို remove လုပ်လိုက်ပြီး ရိုးရိုးရှင်းရှင်းသုံးလို့ရအောင် ပြောင်းထားလိုက်တယ်။ သုံးရအောင်ပိုလွယ်ကူအောင် ဖန်တီးထားတယ်။ File ဖွင့်တာတွေ File အသစ်ဆောက်တာတွေ ကို ပိုရှင်းအောင် လုပ်ထားတယ်။ နောက်ပြီး Logo အသစ်ပြောင်ထားတယ်။ Logo အသစ် ဖန်တီးတဲ့ အကြောင်းကို NSMag ရဲ့ Aug လ ထုတ်မှာ ရေးထားခဲ့ဖူးပါတယ်။
Feature အသစ်အနေနဲ့ Move to icloud ကို ထည့်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော် iOS Device မှာရေးထားတဲ့အပိုင်းကို iCloud ကို ပြောင်းချင်တဲ့ အခါမှာ copy , new file , paste စတာတွေ လုပ်နေရလို့ move to icloud ဆိုတာကို ကျွန်တော် ထပ်ဖြည့်ထားပေးပါတယ်။
Font Size ပြောင်းဖို့အတွက် iOS > Setting > Sar ထဲမှာ ဝင်ပြီး ပြောင်းလို့ရပါတယ်။
အခြား minor bugs လေးတွေ fix လုပ်ထားပါတယ်။
Version 2.0 မှာ Dropbox feature ပါလာပါမယ်။ အခု Dropbox API ကို လေ့လာနေပြီး offline ဖြစ်တဲ့အခါမှာ sync အတွက် ဘယ်လို ဖြေရှင်းထားလဲဆိုတာကို စမ်းသပ်နေဆဲပါ။ Dropbox API ပြီးသွားရင် Version 2.0 ကို အခြား feature အသစ်အချို့နဲ့ ထုတ်ပေးပါမယ်။
Sar ကို App store ကနေ ဝယ်ထားသူများ App Store ကနေ Upgrade လုပ်နိုင်ပါပြီ။ ဝယ်ယူအသုံးပြုတဲ့သူတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လိုအပ်တာတွေကို support at comquas.com သို့မဟုတ် ဒီ post ထဲမှာ comment ရေးထားခဲ့နိုင်ပါတယ်။
« Pogoplug Series4Ornagai Android 2.1.5 »
ကိုစေတန်ရဲ့ Products အားလုံးလိုလိုကို နှစ်သက်အားပေးနေပါတယ်။ အားလုံးအထဲမှာတော့ Sar, Gardar နဲ့ NSMag ကိုအကြိုက်ဆုံးပါပဲ။ (Google Reader ရပ်လိုက်လို့ Gardar ကိုအသုံးပြုလို့မရနိုင်တော့တဲ့အတွက်တော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး။) Products အားလုံးက ဝယ်သုံးရမယ်ဆိုရင်တောင် ဝယ်ရတာ တန်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက် Sar ကို update လုပ်ထားတာ feature တွေပြောစရာမလိုလောက်အောင် ကောင်းမွန်ပါတယ်။ Keyboard ပြဿနာကလည်း မပြောပလောက်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော့်လို Unicode user တစ်ယောက်အတွက် Copy(Unicode) feature က အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။ တကယ်တမ်း Unicode support လုပ်တဲ့ Keyboard သာပါလာမယ်ဆိုရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့ဗျာ။
NSMagကိုသဘောကျပါတယ်. ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ သုံးရတာသိပ်အဆင်ပြေပါတယ်.
Ah Noh says:
Unicode ကီးဘုတ်လည်း အမြန်ဆုံး ပါစေချင်တယ် အကိုခမျ။
What unicode keyboard are you using ? MyanSan ?
Sar လေးရှိနေလို့ စာရေးရတာ အလွန်အဆင်ပြေပါတယ်။ Logo အသစ်လေးကလည်း ပိုပြီး Pro ဆန်တယ်ဗျ။ အားပေးလျှက်ပါ။